kooxaha reer Manchester oo si weyn ugu dagaalamada mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee ka xamaasha horyaalka La Liga – Gool FM
(England) 03 Abriil 2019. Wargeyska “AS” ee dalka Spain, oo xiganaya dhigiisa “Daily Mail” ayaa wuxuu sheegay in kooxaha Manchester United iyo Manchester City ay ku dagaalamayaan saxiixa xidiga Atletico Madrid ee Saúl Ñíguez.
24 jirkan ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhimsan kooxda Atletico Madrid muddo dheer, mana ahan markii ugu horeysay ay xiiso ka muujiyaa kooxaha reer Manchester saxiixiisa.
Wargeyskan Ingariiska ayaa sheegaya in hadii ay Manchester City ku guuldareysato raacdada ay ugu jirto saxiixa xidiga khadka dhexe Atletico Madrid ee Rodrigo Hernández kaasoo ay u aragto inuu yahay badalka saxda ah ee 34 jirka reer Brazil Fernandinho, in dareenkeeda ay u weycin doonto Saúl Ñíguez.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Manchester United ay dhankeeda ka xiiseeneyso soo xero galinta Saúl Ñíguez si ay ugu xoojisato khadkeeda dhexe, isla markaana uu qeyb ka noqdo saxiixyada cusub ay ka doonayaan suuqa xagaaga ee soo aadan, maadaama ay qorsheenayaan xili ciyaareedka soo aadan inay u dagaalamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka noqon doonaan.
Laakiin wargeyska “AS” ayaa sheegay in maamulka Atletico Madrid ay diidan yihiin inay galaan wadahadal ku aadan iibinta Saúl Ñíguez, maadaama uu ka mid yahay tiirarka ugu weyn ay ku taagan tahay kooxda, mana aqbali doonaan qiima kasta ee loo soo bandhigo si ay u fasaxaan ciyaaryahanka heerka caalami ee reer Spain.
Kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa horyaala hal go’aan oo kaliya ee ah inay miiska saaraan qiimo dhan 150 milyan oo euros, waana qiimaha lagu kansali karo heshiiskiisa Atletico Madrid.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Saúl Ñíguez uu kula jiro kooxdiisa haatan ee Atletico Madrid uu gaarayo ilaa iyo 2026.